Indawo yokuhlala enoxolo emaphandleni (abantu aba-2 ukuya kwaba-4)
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguAngelique Et Nicole
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uAngelique Et Nicole iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Indawo yokuhlala edityanisiweyo ye-45 m² ebekwe emaphandleni, ilungele isibini okanye usapho lwabantu aba-4. Kwindawo ezolileyo kumda wehlathi, ilungele ukutshaja iibhetri zakho ngexesha lokuhamba ehlathini.
Imizuzu engama-20 ukusuka eTarbes (i-Equestria, i-AS encinci, iTarbes en Tango) kunye nemizuzu engama-30 ukusuka eMarciac kunye nomnyhadala wayo wejazz.
Ifumaneka kufuphi neendawo ezinkulu zePyrenean (iLourdes, iGavarnie, iCauteret ...) kunye nemisebenzi yayo (ukuskiya, ukukhwela intaba, ukukhwela intaba, iBalneotherapy ...). 1h30 ukusuka kwiLizwe laseBasque (Espelette, Biarritz, Bayonne ...).
Kwaye okuninzi ngakumbi!
Igadi yabucala enethafa ngaphambili nangasemva kwendawo yokuhlala. Indawo yokupaka yabucala eneendawo zokupaka ezi-2 (Khusela ngesango lombane). Itafile yePing pong. Ibhedi yomntwana (ngaphandle komandlalo)
Indawo yokuhlala ibekwe kufutshane nepaki yabantwana, ibala lombhoxo, ibala le-pétanque, iziko leequestrian.
Umbuki zindwendwe ngu- Angelique Et Nicole
UAngelique Et Nicole yi-Superhost
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Aubarède